Warbixin Dheer Oo laga Diyaariyey Hoggaamintii Cali Cabdalla Saalax’ Jabhadayntiisii Iyo Dilkiisii Shalay | Marsa News
Warbixin Dheer Oo laga Diyaariyey Hoggaamintii Cali Cabdalla Saalax’ Jabhadayntiisii Iyo Dilkiisii Shalay
December 5, 2017 - Written by editor marsan
Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax, ayaa la sheegay in lagu dilay dalkaas shalay, ka dib markii dagaal kuli dhex-maray Xuutiyiinta ka dagaallanta waddankaas ku dhex-maray magaalada Sanca, halkaas oo ay Xuutiyiintu sheegeen inay shalay ku duleen, isla markaana ay Baraha Bulshada ku baahiyeen Meydka Qof u eeg Saalax iyo Sawirradiisa oo Madaxa Nabarro kaga yaallaan.
Telefishin ay Xuutiyiintu maamulaan oo lagu magacaabo al-Masirah, ayaa baahiyay shalay iyo xalay Muuqaalka Nin Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabhadda Xuutiyiinta lagu sheegay oo shaacinaya in la soo afjaray dhibaatada Malleeshiyo uu ugu yeedhay Khiyaano Qaran inay samaysay, lana dilay Hoggaamiyihii Malleeshiyadaas Cali Cabdalla Saalax oo ahaa Madaxweynihii hore ee Yemen. Dad ka tirsan Xisbiga Cali Cabdalla Saalax hoggaamin jiray, ayaa sidoo kale xaqiijiyay geeridiisa, sida uu baahiyay TV-ga Al-Carabiya. Sidoo kale, Sawirro iyo Muuqaallo lagu baahiyay Baraha Bulshada waxay muujinayaan Meydka Qof u eg Cali Cabdallaa Saalax oo dhaawacyo xun ay ka gaadheen Madaxa.
Xisbiga Siyaasadeed ee uu ka tirsan yahay, ayaa beeniyay in la dillay xilli hore, ka dib markii Kooxda Xuutiyiinta ay qarxiyeen Gurigiisa ku yaalla Caasimadda Yaman ee Sanca. Wixii ka horeeyay isbuucii tagay, taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax waxay la safnaayeen ururka shiicada ah ee Xuutiyiinta, waxayna dagaal kula jireen dowladda Yaman ee Sucuudiga uu taageero.
Madaxweynaha Yemen ee wakhtigan ee ay Jabhadaha dalkaas ka dagaallama ee Xuutiyiintu ugu awoodda badan yihiin dagaalka kula jiraan Cabdrabbuh Mansuur Haadi oo la doortay ka dib markii Saalax xilka looga tuuray kacdoon, ayaa xarun ka dhigtay Sacuudiga.
Balse, Khilaaf Siyaasadeed iyo muran dhanka Maamulka ee Masaajidka wayn ee ku yaalla meesha Mucaaradku ay Maamulaan ee Sanca, ayaa sababay dagaal culus oo oo dhexmaray Taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax iyo Malleeshiyada Xuutiyiinta. Ugu yaraan 125 Qof, ayaa ku dhimatay, 238 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka oo socday tan iyo Arbacadii la soo dhaafay.
Sabtidii toddobaadkan Cali Cabdalla Saalax wuxuu ku baaqay in bog cusub la furo oo uu taageerayo Mr Haadi, haddii Isbeheysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ay joojiyaan weerarka Yemen iyo xannibaadda xun ee ay ku hayaan.
Isbeheysiga Carabta ee Sucuudigu hoggaamiyo iyo dawladda Cabdurabah Mansuur Haadi, ayaa soo dhoweeyay hadalkaasi Saalax. Balse, Xuutiyiintu waxay Saalax ku eedeeyeen in uu afgembinayo isbeheysi aanu weligii aamminin.
Habeen-hore, magaalada Sanca waxaa ruxay Duqeynta ay geysanayaan Diyaaradaha dawladaha uu hor kacayo Sacuudigu ee Carbeed ee taageera dawladda Yemen, waxaana lala eegtay Xuutiyiinta. Sidoo kale dagaal dhulka ah ayaa la isu adeegsaday hub culus. Hay’adaha gargaarku waxay sheegeen in shacab badan ay ku go’doomeen meesha uu dagaalka culus ka socday.
Salaaddii Duhur ee shalay ka dib, Guriga Cali Cabdalla Saalax ee Sanca, ayaa la qarxiyay. Weli ma cadda in Saalax uu ku jiray Guriga, balse saacado ka dib qaraxa, waxaa soo baxay wararka sheegaya in uu dhintay oo la dilay.
Muuqaal aan la xaqiijin oo Baraha Bulshada lagu baahiyay wuxuu muujinayaa Meyd la sheegay in uu Cali Cabdalla Saalax yahay oo lagu waday Busta guduudan. Waxaa siday Rag hubeysan oo ku qeylinayay; “Allaahu Akbar..” iyo “Cali Cafashi-yoow!….” Weedhan oo ay ula jeedaan Qabiilka uu ka soo jeedo.
Xakim Almasmari, oo ah Tafatiraha Wargeyska Yemen Post, ayaa TV-ga Al-Jazeera u sheegay in dableyda Xuutiyiinta ay rasaas ku fureen Gaadiid Kolonyo ah oo uu Cali Cabddala Saalax saarnaa oo marayey Bar-koontorrool oo ku taalla Koonfurta Sanca, waxaanu intaas ku daray inuu ku sii socday deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanhan.
Cali Cabdalla Saalax wuxuu Madaxweyne ka noqday Waqooyiga Yemen 1978-kii. Markii Yemen ay Midowday 1990-kii, wuxuun Madaxweyne u noqday Jamhuuriyaddii cusbeyd ee Yemen.
Xuutiyiinta oo doonayay in ay go’aan Shiicada Zaidi ee laga badan yahay, ayaa Saalax la dagaallamay, laga soo billaabo 2004 illaa 2010-kii. Waxay sidoo kale taageereen kacdoonkii 2011, xilka looga tuuray Cali Cabdalla Saalax, wuxuuna xilka ku wareejiyay ku xigeenkiisii, Cabdurabah Mansuur Haadi.
Taageerayaasha Saalax, ayaa ku biiray kacdoonka Xuutiyiinta ee lagu qabsaday Sanca 2014. Horraantii sannadkii 2015, Madaxweyne Haadi wuxuu ku qasbanaaday in uu Cadan u guuro, ka dibna Sacuudiga. faragelinta isbeheysiga Sacuudiga ayaa ah in Haadi dib loogu celiyo maamulka dalka Yaman.
In ka badan 8,670 Qof, ayaa lagu dilay, 49,960 kalena waa lagu dhaawacay dagaalka bilowday ka dib markii isbeheysiga Sacuudiga uu farageliyay Yaman sannadkii 2015-kii, sida ay sheegtay Qaramada Midoobey.
Dagaalka iyo go’doominta ayaa sababay 20.7 milyan oo qof in ay si adag ugu baahdaan gargaar bini-aadamnimo. Arrintaas ayaa lagu tilmaamay in ay tahay cunta la’aanta ugu xun Caalamka, waxaana ka dhashay daacuun dilay 2,211 qof, tan iyo bishii April. Xigasho
Copyright © 2012 - 2018 marsanews.com ®All rights reserved.